भोक लाग्यो ? ‘कांग्रेसको क्यान्टिन’ छ नि ! – Saurahaonline.com
काठमाडौँ, ४ भदौ । ठूलो दल बनेको नेकपा यतिबेला सरकारमा छ ।प्रतिपक्षमा छ, कांग्रेस ।ठूलो पार्टीको हैसियतले सिंहदरबारस्थित नेकपा संसदीय दलको कार्यालयमा भीडभाड हुनुपर्ने हो ।
‘धेरै थरीका परिकार पकाइएका हुन्छन्, रोजेर खान पाइन्छ’, उनले भने, ‘मचाहिँ प्रायः फापरको रोटी र मकै खान्छु । यसले स्वास्थ्यमा फाइदा पुर्‍याउँछ ।’आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।